Sabotsy 18 Mey 2019. – FJKM
Asan’ny Apostoly 3.12-26
Jesoa Kristy avy any Nazareta
Izany anarana izany no loharanon’ny fahagagana vitan’ny Apostoly . Mamerina ny Jiosy amin’ny fahalalana marina ny fahatanterahan’ny teny fikasana voalaza ao aminn’y Testamenta taloha i Petera (and17,18).
Ny herin’ny finoana ny Anaran’i Jesoa Kristy
Manana ny fahefana hanangana izay rava ny Anaran’i Jesoa Kristy. Ny finoan’ny kristiana izany no mitondra vokatra mahagaga eo amin’ny fiainana (and16). Ny fanahin’ny mila vonjy dia tokony hangateaheta sy hiandrandra izany amin’ny firehetam-pinoana .
Mbola heloka ny amin’ny andron’ny tsi-fahalalana ny Tompo , fa miantso kosa ny olon-drehetra ho aminn’y fibebahana (and19). Misy fetra anefa ny vanim-potoana hahafahana mibebaka . Mifarana mialoha ny fampodiana ny zavatra rehetra ho eo an-tànan’i Kristy izany (and19-21).
Fanapahankevitra manokana ny fialana amin’ny ratsy fanao . Tsy ampy anefa izany fa ilaina ny mibebaka, izany hoe: miverina amin’ilay Andriamanitra mba hahazoana famelankeloka.
« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra »Boky faha- 8